Hoggaamiyaha Taalibaan oo soo saaray amar ka dhan ah 'jaajuusiin ku dhex jira' kooxda
Hoggaamiyaha sare ee Taalibaan ayaa ka digay halista wax uu ugu yeeray “daba-dhilifyada iyo jaajuusiinta ku dhex jira” kooxdaas dhowaan qabsatay dalka Afghanistan.
Ayada oo ay caddeyn u tahay heerka ay gaarsiisan tahay halistan, ayaa Haibatullah Akhundzada waxa uu soo saaray bayaan qoran oo nadir ah, wuxuuna taliyayaasha Taalibaan siiyey amar ah inay sifeeyaan talisyadooda.
“Khalad kasta oo dhaca, odayaasha ayaa mas’uul ka ah cawaaqibkiisa dunida iyo aakhiraba,” ayuu ka digay Haibatullah Akhundzada oo qoraalkiisa lasoo dhigay cinwaano dhowr ah oo Taaliibaan ay ku leedahay twitter.
Taalibaan ayaa tan iyo markii ay dalka dib u qabsatay bishii August, waxay kooxda kusoo dartay xubno dhowr ah oo isugu jiray mucaarad iyo dowladdii hore.
Waxay hadda wajaheysaa weeraro dhowr ah oo kaga imanaya kooxda Daacish ee Khorosan.
Dhinaca kale Haibatullah Akhundzada ayaa ku amray taliyayaasha kooxda inay hagaajiyaan dhaqanka askartooda kadib markii toddobaadkii tegay xubno sheegtay inay yihiin Taalibaan ay weerareen xaflad aroos ayaga oo diidan music laga shiday, halkaasi oo dhowr qof lagu dilay.
“Taliyayaasha cutubyada waa inay qaataan waqtigooda oo ay la fariistaan dagaal-yahanada cusub, kana shaqeeyaan hagaajinta dhaqankooda iyo dabeecadahooda, si mujaahidiinta ay si wanaagsan ugu shaqeeyaan taliyahooda,” ayuu yiri.